N’ihi Gịnị Ka O Ji Emegbu M?
Teta! | Jun 8, 2004
GỤỌ NKE Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Czech Danish Dutch English Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Korean Lithuanian Malagasy Portuguese Romanian Russian Setswana Slovak Slovenian Swahili Turkish Ukrainian
“[Enyi m nwoke] na-ebokarị m ebubo ndị na-enweghị nnọọ isi. Ma obi m dị n’ebe ọ nọ.”—Kathrin. *
“Ọ dịghị [ọnyá ọ bụla] ị na-ahụ n’elu ahụ́, ma ọ na-egbu m nnọọ mgbu n’obi.”—Andrea, bụ́ onye enyi ya nwoke mara ụra.
Ọ BỤ ọnọdụ a na-ahụkarị nnọọ: Nwa agbọghọ amalite iso nwa okoro yiri nnọọ ka à ga-asị na ọ dịghị ezi mmadụ mara mma ka ya, na-eme mkpapụ. Ma nwayọọ nwayọọ, ya amalite ịgbanwe. Kama ịnọgide na-agwa nwa agbọghọ ahụ okwu ịhụnanya, ihe a na-anụzi n’ọnụ ya abụrụ okwu mkparị ndị na-agbakasị ahụ́ na okwu nkatọ ndị na-ewetu mmadụ ala. Na mbụ, nwa agbọghọ ahụ ewere ya dị ka njakịrị ịhụnanya a na-edebeghị ọnụ nke ọma maa. Otú ọ dị, ihe abịa ka njọ ruo n’ókè nke nwa okorobịa ahụ ịgwakasị ya okwu ahụ́, iwesa ya iwe, na ikwu okwu ndị na-egosi na ọ na-akwa oké ụta. N’ịbụ onye na-eche n’ụzọ ụfọdụ na ọ bụ ya kpatara àgwà ọjọọ ahụ enyi ya nwoke na-akpa, nwa agbọghọ ahụ ajụ ịkọsara mmadụ ihe na-eme ya, na-enwe olileanya na ihe ga-agbanwe. Ma ihe agbanweghị. Enyi ya nwoke amalitezie ịbakasị ya ahụ́. N’otu oge iwe were ya, ọbụna ya akwaa ya aka! Egwu atụwa ya na n’oge ọzọ ọ ga-eti ya ihe. *
Ụmụ okoro na agbọghọ bụ́ ndị nọ ná mmekọrịta ịhụnanya e ji iti ihe ma ọ bụ ịgwakasị okwu ahụ́ mara, pụrụ ịdị na-agwa ibe ha okwu nkatọ, okwu na-egbu mmụọ, na-ewesokwa ibe ha ókè iwe mgbe nile. Ị̀ nọ n’ọnọdụ dị otú ahụ? (Lee igbe bụ́ “Ụfọdụ Ihe Mgbaàmà Ịdọ Aka ná Ntị”) Ọ bụrụ otú ahụ, ị pụrụ ịnọ nnọọ ná mgbagwoju anya nakwa n’obi erughị ala nke na ị gaghị ama ihe ị ga-eme eme.
Ọnọdụ ndị dị otú a abụghị nke a na-adịghị ahụkarị dị ka ị pụrụ iche. Ndị nchọpụta na-eme atụmatụ na e mesowo 1 onye n’ime mmadụ 5 ọ bụla ihe ike n’oge a na-eme mkpapụ. Ọ bụrụ na a gụnye ịkpọ iyi dị ka otu ụdị nke ime ihe ike, atụmatụ a ga-arị elu ruo mmadụ 4 n’ime mmadụ 5 ọ bụla. N’ụzọ dị iche n’ihe ọtụtụ ndị na-eche, ọ bụghị nanị ụmụ nwanyị ka a na-emeso omume a. Dị ka otu nnyocha ndị Britain mere banyere imeso mmadụ ihe ike n’oge a na-eme mkpapụ na-egosi, “ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent há nhata nke ndị nwoke na ndị nwanyị” na-eme mkpapụ kọrọ na ndị ha na ha na-eme mkpapụ na-emeso ha ihe ike. *
N’ihi gịnị ka e ji enwe àgwà ọjọọ dị otú ahụ n’oge mbedo? Gịnị ka i kwesịrị ime ma ọ bụrụ na ị hụ onwe gị n’ọnọdụ dị otú ahụ?
Ịmata Echiche Chineke
Nke mbụ, ị ghaghị ịghọta nnọọ otú ọnọdụ dị otú ahụ si dị oké njọ n’anya Chineke. Nke bụ́ eziokwu bụ na ụmụ mmadụ na-ezughị okè ga-emerịrị ma ọ bụ kwuo ihe ndị ga-ewute ndị ọzọ. (Jems 3:2) Ọ bụkwa eziokwu na mgbe ụfọdụ ọbụna ndị hụrụ onwe ha n’anya ma tụkwasị onwe ha obi ga-enwe nghọtahie. Dị ka ihe atụ, Pọl onyeozi na Banabas bụ Ndị Kraịst tozuru okè. Ma, n’otu oge, ha nwere “oké ntiwapụ nke iwe.” (Ọrụ 15:39) N’ihi ya, ọ bụrụ na ọ dị onye gị na ya na-eme mkpapụ, ọ dị mfe na unu ga-esetụ okwu mgbe ụfọdụ.
Ọzọkwa, ọ ga-abụ ihe ezi uche na-adịghị na ya iche na ọ dịghị mgbe enyi gị nwoke ga-akatọ gị. E kwuwerị, unu na-eche echiche ịghọ di na nwunye. Ọ bụrụ na ọ dị àgwà ị na-akpa nke na-enye ya nsogbu n’obi, ọ́ gaghị abụ ngosipụta nke ịhụnanya ma ọ bụrụ na ọ gwa gị banyere ya? N’eziokwu, okwu nkatọ na-ewute ewute. (Ndị Hibru 12:11) Ma ọ bụrụ na e jiri ịhụnanya gwa gị ya, o soghị n’okwu mkparị.—Ilu 27:6.
Otú ọ dị, iti mkpu, ịma ụra, isu ọkpọ, ma ọ bụ ịgwakasị mmadụ okwu ọjọọ ahụ́ bụ ihe ọzọ dị nnọọ iche. Bible na-akatọ ‘ọnụma, iwe, ihe ọjọọ, okwu mkparị.’ (Ndị Kọlọsi 3:8) Ọ na-ewe Jehova iwe mgbe mmadụ na-eji “ike” eme ihe n’ụzọ na-ezighị ezi n’iweda ndị ọzọ ala, n’imenye ha ụjọ, ma ọ bụ n’imekpọ ha ọnụ. (Eklisiastis 4:1; 8:9) N’eziokwu, Okwu Chineke na-enye ndị bụ́ di iwu ka ha “na-ahụ nwunye ha n’anya dị ka ahụ́ nke ha . . . , n’ihi na ọ dịghị nwoke kpọtụworo anụ ahụ́ nke ya asị; kama ọ na-azụ ma na-elezi ya anya.” (Ndị Efesọs 5:28, 29) Nwoke nke na-akparị nwanyị ya na ya nọ ná mbedo ma ọ bụ na-emeso ya omume ọjọọ na-egosi onwe ya dị ka onye na-erughị eru ịbụ di ya. N’otu mgbe ahụ, ọ na-eme ihe Jehova Chineke n’onwe ya ga-eji wesa ya iwe!
Ọ Bụghị Gị Kpatara Ya!
Otú o sina dị, ndị na-eme omume a na-atakarị ndị ha na-emeso ya ụta. Ikekwe, ị pụrụ iche mgbe ụfọdụ na ọ bụ gị kpatara oké iwe na-ewe enyi gị nwoke. Ma, o nwere ike ọ bụghị gị kpatara iwe na-ewe ya. Mgbe mgbe, ndị ikom na-eti mmadụ ihe na-abụ ndị a zụlitere n’ezinụlọ ebe e weere ime ihe ike na ikwu okwu mkparị dị ka ihe na-adịghị njọ. * N’ala ụfọdụ, ọdịnala zuru ebe nile nke a na-atụ ụmụ nwoke anya n’aka ịbụ ndị na-egosi na ọ bụ ha nọ n’isi, na-emetụta ụmụ okorobịa. Ndị ọgbọ pụkwara ịrụgide nwa okorobịa ịdị na-egosi na ọ bụ nwoke. N’ihi enweghị obi ike n’ime onwe ya, okwu ọ bụla i kwuru ma ọ bụ ihe ọ bụla i mere pụrụ ime ka ahụ́ ghara ịdị na-eru ya ala.
Ihe ọ sọrọ ọnọdụ ahụ ya bụrụ, ọ bụghị gị kpatara ihe mere onye ọzọ ji na-ewe oké iwe. Ọ dịghị mgbe ọ bụla mkparị na ime ihe ike ziri ezi.
Ịgbanwe Echiche Gị
Ọ bụrụgodị na ọ bụghị gị na-akpasu onye ọzọ iwe, ọ pụrụ ịdị mkpa ịgbanwe ọbụna ụzọ i si ele ihe anya. N’ụzọ dị aṅaa? Tụleedị ihe a, ọ bụrụ na a zụlitere nwa agbọghọ n’onwe ya n’ezinụlọ ebe ime ihe ike na okwu ọjọọ na-arị ibe ha elu, okwu ọjọọ pụrụ iyi ya ihe kwesịrị ekwesị. Kama ịbụ onye omume dị otú ahụ na-ekwesịghị Onye Kraịst na-asọ oyi, ọ pụrụ ịnabata ya—ikekwe, ọbụna were ya dị ka ihe na-adọrọ mmasị. Ee, ụfọdụ ndị e mesoro ihe n’ụzọ na-adịghị mma na-ekweta na ụmụ nwoke ndị na-eme nnọọ mma mma na-agbụ ha agbụ. Ụmụ agbọghọ ndị ọzọ na-ehie ụzọ site n’ikwere na ha pụrụ ịgbanwe enyi ha nwoke.
Ọ bụrụ na i nwere nke ọ bụla n’ime echiche ndị a, ọ dị gị mkpa ‘ịbụ onye e nwoghara site n’ime ka uche gị dị ọhụrụ’ n’ihe banyere nke a. (Ndị Rom 12:2) Site n’ekpere, ọmụmụ ihe, nakwa ntụgharị uche, ọ dị gị mkpa ile àgwà ọjọọ ahụ anya n’ụzọ Jehova si ele ya anya ma hụ ya dị ka ihe rụrụ arụ. Ọ dị gị mkpa ịghọta na e kwesịghị imegbu gị. Ịmara ebe ike gị ruru pụrụ inyere gị aka ịghọta na i nweghị ikike nke ịgbanwe enyi gị nwoke na-ewekarị iwe. Ọ dị ya n’aka ịgbanwe!—Galeshia 6:5.
N’ọnọdụ ụfọdụ, ụmụ agbọghọ na-anagide mmeso ọjọọ n’ihi enwechaghị ùgwù onwe onye. Kathrin, onye a kpọtụrụ aha ná mmalite na-ekwu, sị, “Amaghị m otú ndụ m ga-adị ma m hapụ ya, agaghị m enwetali onye ka ya mma.” Nwa agbọghọ aha ya bụ Helga kwukwara ihe yiri nke ahụ banyere enyi ya nwoke, sị, “Ana m ekwere ka ọ na-akụ m ihe n’ihi na ọ ka mma karịa enweghị enwe.”
Echiche ndị dị otú ahụ, hà na-egosi ezi ntọala maka mmekọrịta ga-aga nke ọma? E kwuwerị, ì nwere ike ịhụ onye ọzọ n’anya ma ọ bụrụ na ị pụghị ọbụna ịhụ onwe gị n’anya? (Matiu 19:19) Zụlite ùgwù onwe onye kwesịrịnụ. * Ịnagide mmeso ọjọọ agaghị enyere gị aka ime otú ahụ. Dị ka otu nwa agbọghọ aha ya bụ Irena ghọtara site n’ahụmahụ o nwere, ịnagide mmeso ọjọọ pụrụ “ịnapụ gị ùgwù onwe onye gị nile.”
Iche Eziokwu Ihu
Ọ pụrụ isiri ụfọdụ ndị ike ikweta na ha nọ ná mmekọrịta na-ekwesịghị ekwesị—karịsịa ma ọ bụrụ na ndọrọ mmekọahụ ha nwere n’ahụ́ ibe ha esiwo ike. Ma emela anya ka ị maghị ihe na-aganụ. Otu ilu Bible na-asị: “Onye nwere ezi uche ahụwo ihe ọjọọ, wee zobe onwe ya: ma ndị na-enweghị uche agabigawo, e wee rie ha nha.” (Ilu 22:3) Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Hanna na-echeta, sị, “Mgbe ị hụrụ nwa okorobịa n’anya, ị gaghị na-ahụchakwa ụzọ, ihe ị ga na-ahụ bụ nanị àgwà ọma ya.” Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ na-emeso gị mmeso ọjọọ, ọ dị mkpa ịhụ ya otú ọ dị n’ezie. Ọ bụrụkwa na enyi gị nwoke na-emenye gị egwu, ma ọ bụ na-elelị gị anya, mara na agwọ nọ n’akịrịka. A nwakwala anwa leghara mmetụta ị na-enwe anya, na-agọpụrụ ya ma ọ bụ na-ata onwe gị ụta. Ahụmahụ e nwere egosiwo na ọ bụrụ na a kwụsịghị ọnọdụ ahụ, mmeso ọjọọ ahụ ga na-arịwanye nnọọ elu. Ndụ gị pụrụ ịdị n’oké ihe ize ndụ!
Otú ọ dị, ọ kasị mma ọbụna ịghara iso onye na-enweghị njide onwe onye banye ná mbedo. (Ilu 22:24) N’ihi ya, ọ bụrụ na onye ị na-amaghị nke ọma achọọ ka gị na ya malite ime mkpapụ, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịchọpụta ụdị onye ọ bụ. Gịnịkwanụ ma ị tụọ aro ka unu buru ụzọ na-akpakọrịta n’ebe ìgwè mmadụ nọ? Nke a ga-enye gị ohere ịchọpụta ụdị onye ọ bụ n’azụliteghị ndọrọ mmekọahụ ngwa ngwa. Jụọ ajụjụ ndị bara uru, dị ka ndị a: Olee ndị bụ́ enyi ya? Olee ụdị egwú, ihe nkiri sinima, egwuregwu kọmputa, na egwuregwu nkịtị ndị na-amasịkarị ya? Mkparịta ụka ya ọ̀ na-egosi na ihe ime mmụọ na-amasị ya? Soro ndị maara ya kwurịta okwu, dị ka ndị okenye ọgbakọ ya. Ha ga-eme ka ị mara ma ọ̀ bụ onye ndị ọzọ ‘na-akọ akụkọ ọma banyere ya’ n’ihi ịbụ onye tozuru okè na onye nwere àgwà nsọpụrụ Chineke.—Ọrụ 16:2.
Ma gịnị ka ị pụrụ ime ma ọ bụrụ na ị nọrịị anọ ná mmekọrịta nke a na-emegbu gị na ya? Isiokwu na-abịa n’ihu ga-aza ajụjụ a.
^ par. 3 A gbanwewo aha ụfọdụ.
^ par. 5 Isiokwu a na-ekwu banyere ndị a na-agwakasị okwu ahụ́ na ndị a na-eti ihe. E nyere ndụmọdụ ndị pụrụ inyere ndị na-akpa àgwà ahụ aka n’isiokwu ndị bụ́ “Site n’Okwu Na-emerụ Ahụ Gaa n’Okwu Na-agwọ Agwọ” ná mbipụta anyị nke November 8, 1996, nakwa “Ịchọ Okwu—Olee Ihe Ọjọọ Dị Ya?” ná mbipụta anyị nke April 8, 1997.
^ par. 7 Otú ọ dị, iji mee ka ihe dị mfe, anyị ga na-ezo ndị e mesoro mmeso ọjọọ a aka dị ka ndị inyom. Ụkpụrụ ndị a tụlere n’ime isiokwu a na-emetụtakwa ma ndị nwoke ma ndị nwanyị.
^ par. 14 Lee isiokwu bụ́ “Ikpughe Mkpọrọgwụ nke Nkwulu,” n’ime mbipụta anyị nke November 8, 1996.
^ par. 20 Lee isiakwụkwọ nke 12 n’akwụkwọ bụ́ Ajụjụ Ndị Na-eto Eto Na-ajụ—Azịza Ndị Na-adị Irè, bụ́ nke Ndịàmà Jehova bipụtara.
[Igbe dị na peeji nke 29]
Ụfọdụ Ihe Mgbaàmà Ịdọ Aka ná Ntị
▪ Ọ na-ekwukarị okwu nlelị banyere gị, banyere ezinụlọ gị, ma ọ bụ banyere ndị enyi gị, mgbe nanị unu abụọ nọ ma ọ bụ mgbe unu na ndị ọzọ nọ
▪ Ọ na-elegharakarị ọchịchọ gị ma ọ bụ echiche gị anya
▪ Ọ na-agbalị ịchịkwa akụkụ nile nke ndụ gị, na-achọkarị ịmata ebe ị nọ n’oge ọ bụla ma na-emere gị mkpebi nile
▪ Ọ na-agwakasị gị okwu ahụ́, na-akwa gị aka, ma ọ bụ na-eyi gị egwu
▪ Ọ na-anwa ime ka i kweta ime ngosipụta ịhụnanya ndị na-ekwesịghị ekwesị
▪ Ọ na-esiri gị ike ime ihe ọ bụla n’echegbughị onwe gị ma ọ̀ dị ụzọ ọ bụla ọ ga-esi kpasuo ya iwe
Mmekọrịta ọ bụla a nọgidere na-enwe nkatọ ma ọ bụ mkparị na ya pụrụ igosi na mmekọrịta ahụ ekwesịghị ekwesị
N’ihi Gịnị Ka E Ji Nwee Ọtụtụ Ndị Owu Na-ama?
Ịnagide Owu Ọmụma
Mgbe Ọ Na-adịghị Onye Owu Ga-ama Ọzọ
Ọgụ A Lụwara Kemgbe Ụwa Maka Ahụ́ Ike Ka Mma
Ihe Ịga nke Ọma na Ọdịda Ndị E Nwere n’Ịlụso Ọrịa Ọgụ
Ụwa nke Ọrịa Na-agaghị Adị na Ya
Nchegbu Ọ̀ Na-egosi Enweghị Okwukwe?
N’ihi Gịnị Ka Ọtụtụ Mmadụ Ji Enwe Azụ̀zụ̀ Hay?
Ịchịkwa Ịnyịnya Na Ire
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu TETA! Jun 8, 2004
TETA! Jun 8, 2004